Buhari lọghachiri n’Abuja n’ụbọchị ụka mgbe o merechara njem were ya mkpụrụ ụbọchị ano n’Ankara yana Istanbul.
Buhari jere nzụkọ D-8 Summit agba nke itolu n’Istanbul, na abali iri abụọ nke ọnwa Ọkụtoba.
Ụgbọ elu nke onye isi-ala feliri site n’ọdụ ụgbọ elu Ataturk, n’Istanbul ka ọ kụrụ elekere iri na abụọ. O rutere n’ọdu ụgbọ elu Nnamdi Azikiwe International Airport, nke Abuja ka o jiri nkeji ise gafee elekere anọ.
Ndi isi ọrụ gọọmenti, nke gunyere onye Chief of Staff, Abba Kyari, Inspector-General nke ndi uwe ojii, Idris Ibrahim, Minista na-ahụ maka mpaghara Abuja (FCT), Alhaji Mohammad Bello na ndi isi ọrụ ndị ọzọ, bụ ndị cheere Buhari n’ọdụ ụgbụ elu ịsị ya nnọ ije. Ha nabatara Buhari na nwunye ya bụ Aịsha na ndị ọzọ soro ha ga njem ahụ.
Ịlụ nwaanyị bụ ọzọ dịịrị okokporo niile, ma bụrụkwa a na-agụrụ akwụ nwanne ya a na-eghe. Ọ bụ ụkwa...
N'ihi ntụli aka na-akpụdobe nso na steeti Anambra, na iji hụ na ihe niile gara nke ọma, aka na-ach...
O pekata mpe, mmadụ 17 anwụọla n’obodo Mogadishu, isi ala mba Sọmalịa, mgbe ndị agha iyi egw...
A kọwaala na dịka ihe siri gbata kwụrụ ugbu a, na ụmụakwụkwọ dị iri asaa na isii n'ime mmadụ ...
A kpọkuola ndị na-atụ akwụkwọ na steeti Anambra ka ha makụọ ma kwado otu pati APGA na nhọpụta na-a...